तपाईंसँग उद्यमी बन्ने योजना छ ? आइडिया स्टुडियो बन्न सक्छ सारथि
सोचलाई उद्योगसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित टेलिभिजन कार्यक्रम 'आइडिया स्टुडियो सिजन–५' सुरु भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै स्टुडियोले युवाहरूलाई नयाँ आइडियासहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
सहभागिताका लागि आगामी ७ फेब्रुअरीसम्म आवेदन दिन आइडिया स्टुडियोले आह्वान गरेकाे छ ।www.ideastudio.org.np मार्फत आवेदन दिन सकिने छ ।
गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि स्टुडियोले मेड इन नेपाल, सोसल इम्प्याक्ट, हाइ फ्ल्याइङ र ग्रिनोभेसन गरी चार वटा सेगमेन्टमा विजनेस आइडिया प्रस्तुत गर्ने मौका दिने जनाएकाे छ । उत्कृष्ट आइडिया पेस गरी डिल राउण्डमा पुग्ने प्रतिस्पर्धीले नगद पाँच लाख रुपैयाँ व्यवसायका लागि सहयाेगस्वरूप प्राप्त गर्नेछन् । साथै आइडिया स्टुडियोले सहभागी ३५ प्रतिस्पर्धीलाई व्यावसायिक प्रशिक्षणसमेत दिनेछ ।
आइडिया स्टुडियोको सिजन-४ मा २४ जना सिर्जनशील युवाहरूलाई चार वटा सेग्मेन्टमा विजनेस आइडियाहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिइएको थियो । डिल राउण्डअन्तर्गतका आइडिएटरहरू (आइडिया प्रस्तुत गर्नेहरू)लाई व्यावसायिक सहयोगको साथै व्यावसायिक प्रशिक्षण पनि दिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २२, २०७७, १८:१८:००
कोभिडविरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रबाट भएका प्रशंसनीय काम, कसले के गरिरहेको छ ? कोभिडविरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रबाट भएका प्रशंसनीय काम, कसले के गरिरहेको छ ?6min read